प्रचण्डका घरबेटीको ज्यादती: २ वर्षमा बन्नु पर्ने सडक ९वर्ष अलपत्र।चिया खर्च भन्दै दैनिक २०औ हजार घुस : भिडियो हेर्नुहोस । – Complete Nepali News Portal
प्रचण्डका घरबेटीको ज्यादती: २ वर्षमा बन्नु पर्ने सडक ९वर्ष अलपत्र।चिया खर्च भन्दै दैनिक २०औ हजार घुस : भिडियो हेर्नुहोस ।
काठमाडौं , नेपाली पत्रकारितामा पछिल्लो समय चर्चाको चर्चामा रहेका छन् पत्रकार रवि लामिछाने । न्यूज २४ मा कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सँगले उनको उचाई माथि पुराएको छ । जनता सँग सिधा सम्पर्क, भष्ट्चार अनि न्यायका लागि उनको आवाज धेरैको लागि आवाज बिहिनका लागि आवाज बनेको छ । भने भष्ट्रचारीहरुलाई पर्दाफास गर्दै उनी देश तथा बिदेशमा लाखौ दर्शकको नजरमा परेका छन् ।
आजको बिशेष सिधा कुरा जनतासंग मा
: रबि लामिछाने लेख्नु हुन्छ : प्राय सबै ठेक्का अलपत्र पारेको देख्दा “प्रचण्डका घरबेटी”भन्न हामीलाई नै लाज लागिसक्यो,”डेरावाल प्रचण्ड” लाई किन अप्ठ्यारो नलागेको होला? २ वर्षमा सक्नु पर्ने सडक ९ वर्ष सम्म नसक्न पनि पाइने रहेछ। कार्वाहीको साटो म्याद थपेको थप्यै, थपेको थप्यै,थपेको थप्यै,थपेको थप्यै,थपेको थप्यै… अब त आयोजनाको बजेट नै थप्ने पो हुन कि?
रमेश प्रसाईं र नन्दाको यस्तो प्रेमकहाँनी,कुमारले
अन्ततः भाइरल बाजेले जन्माए फुलन्दे,चिबे रकोपाको